openHAB: otomatiga guriga farahaaga farahaaga | Laga soo bilaabo Linux
Mashruuca furanHAB ujeedadeedu tahay inay bixiso madal is dhexgalka guud ee dhammaan nidaamyada ka jira gudaha qalabaynta gurigaloo yaqaan sida qalabaynta guriga.
Kadib 2 sano iyo badh oo shaqo culus ah, nooca 1.0 ee openHAB ayaa loo heli karaa soo dejinta liisanka GPL v3.
Waxaa loogu talagalay inuu noqdo gabi ahaanba iibiye / iibiye madaxbannaan, iyo sidoo kale qalab iyo maamuus. OpenHAB waxay isu keentaa nidaamyo basas kala duwan, aaladaha qalabka iyo hab maamuusyo. Hab-maamuusyadani waxay diraan oo helaan amarro iyo cusboonaysiinta xaaladda baska dhacdada. Fikradani waxay u oggolaaneysaa qaabeynta isdhexgalka isticmaalaha muuqaal isku mid ah & dareen, laakiin suurtagalnimada aaladaha hawlgalka ee ku saleysan tirooyin fara badan oo kala duwan. Kaliya maahan inay u oggolaato isdhexgalka isticmaalaha guud, waxay sidoo kale qaadataa awoodda macquulka otomatiga ee xudduudaha nidaamyada kala duwan.
Waqtigan xaadirka ah, waxay taageertaa hab maamuuskan, waana mid si fudud loo dheelitiri karo:
AVM Fritz! Sanduuqa
MPD (Muusigga Ciyaaryahan Deamon)
Hubinta helitaanka shabakadda
NTP (Nidaamka Waqtiga Shabakada)
SNMP (Hab maamuuska Maareynta Shabakada fudud)
VDR (Diiwaanka Muuqaalka Muuqaalka)
Soo dejiso openHAB
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » openHAB: otomatiga guriga farahaaga
Alvaro Morales dijo
Waxay noqon laheyd mid xiiso leh in la arko mashruuc u dhexeeya softiweer sidan oo kale ah iyo barnaamijka 'Arduino platform' (aad uga raqiisan kan gudbinta barnaamijka, waana bilaash!).
Jawaab Álvaro Morales
Waan jeclahay wax kasta oo la xiriira otomatiga guriga, korantada iyo Linux, aad ayaad ugu mahadsan tihiin wararka. Waxaan u maleynayaa inay tani noqon doonto hiwaayadeyda wixii hada ka dambeeya waxaana rajeynayaa mustaqbalka dhow inuu ii noqon doono isha dakhliga ^ __ ^ Mashruuc kale oo xiise leh ayaa ahhttp://opendomo.com/)
Jawaab Javier García
mashruuc xiiso leh
Waxaan kuugu hambalyeynayaa barta, waa wax fiican, sii wad!
Wanaagsan, waan jeclaaday tan 😉
Pablo, wax ma ka maqashay Ubuntu 12.10 oo la socota WAYLAND?
Waan ka xumahay jaahilnimadayda, laakiin runtii ma fahmin waxa tan loogu talagalay. : S
Jawaab Ayosinho El AbayaLde
Waxaan kujiraa isla jagadaada.
Ma haysaa wax xog ah oo ku saabsan qaybta "qalabka" si aad tan u fuliso?
Fikirka arduino waa ficil, laakiin anigu ma doonayo inaan wax walba sameeyo sidaas laga bilaabo 0
Jawaab Agustín Díaz
Ku duub makarafoonkaaga sida ugu fudud ee suurtogalka ah (loogu talagalay KDE, Gnome, Unity, Xfce, iwm)